Sidee Suuqgeynta Mawduucyadu Saameyn Ugu Yeelaysaa Iibintaada? | Martech Zone
Sidee Suuqgeynta Mawduucyadu Saameyn Ugu Yeelaysaa Iibintaada?
Markii ugu horraysay ee aan qoro cinwaanka qoraalkan, ayaan qoray Sidee laakiin si daacad ah uma aaminsani in shirkado aad u tiro badani ay fahmeen sida mid kastaa u saameynayo kan kale sidaa darteed ayaan ugu beddelay Sidee habboon. Waxaan badanaaba aragnaa waraaqo qurux badan iyo daraasado kiis oo ay soo saartay waaxyada suuq-geynta kuwaas oo loo calaamadeeyay si bilaa cillad ah, si hufan loo xardhay, oo si wanaagsan loo dhigay. Laakiin markaa waxaan la imaaneynaa banaanbax kooxda iibinta banaanka waxaanan aragnaa soo bandhig si fudud horrid ah.
Taasi ma eedeyneyso waaxda iibka oo waxay ammaaneysaa waaxda suuqgeynta. Xaqiiqdii waxay ka dhigan tahay waxyaabaha suuqgeynta aysan qiimeynin kooxda iibka oo laga fogaado gebi ahaanba. Taasi waxay u badan tahay inay tilmaamayso dhibaato aad u weyn oo suuqgeynta aysan u horseedin booqdaha iibka. Inta badan xaaladahaas kooxda iibku waxay ku qaylinayaan tayada hogaamiyaasha waaxda suuqgaynta waxay ku qaylinayaan in kooxda iibku aysan xiri karin wax.
Suuqgeynta Mawduucyada waa habab gacan ka geysanaya abuurista wacyigelin iyo xiisaha iyada oo loo marayo feker ahaan, madadaalo, iyo ku lug lahaansho waxyaabo. Laakiin kooxaha iibku waxay u baahan yihiin inay si la mid ah u keenaan waxyaabo badan. Ka dib oo dhan, iibsadayaasha ayaa si sii kordheysa uga go'an kooxda iibka inta lagu jiro habka iibinta. Taasi waxay ka dhigan tahay in hawlgal kastaa u baahan yahay qiime sare. Taasna macnaheedu waa in iibsadayaashu ay u baahan yihiin inay lahaadaan waxyaabo faa'iido leh oo ay ku dhisaan kiiskooda ganacsi gudaha. Muhiimadda nuxurka ay u leedahay geeddi-socodka iibku waxay noo horseeday inaan qeexno macnaha Iibinta Mawduuca: Iibinta Mawduucyada ayaa ka caawisa iibka inay ogaadaan, gudbiyaan, lana socdaan wax-ku-oolnimada farriimaha horumarinaya ka qaybgalka iibka. Daniel Chalef, AqoontaTree
Kooxaha iibku waxay ka faa'iideysan karaan isbeddelka iibinta waxyaabaha ku jira. Suuqgeyntu waxay gabi ahaanba awood u siin kartaa iibinta casharadii ay ku barteen Suuqgeynta Mawduuca - sida lagu arkay muuqaalkan xog-ogaalka ah ee ka socda Aqoonta, Suuqgeynta Mawduuca, La Kulan Iibinta Mawduucyada.
Tags: waxyaabaha ugu fiicanmuhiimadda ay leedahayContent Suuqiibinta waxyaabahawaxyaabaha ku iibinaya infographicinfographiccabir waxtarka ku jirasaxda ahbeegsiga waxyaabaha